Lammaanaha Bill iyo Melinda Gates oo soo afjaray guurkooda | Hangool News
Bill Gates iyo xaaskiisa Melinda ayaa shaaciyay in ay soo afjarayaan guurkooda, kadib markii ay wada joogeen muddo 27 sano ah. Waxa ay sheegeen in “aanay u muuqan inay ka lammaane ahaan horumarkooda ka shaqeyn karaan”.
“Kadib dedaal dheer oo ku aaddan xiriirkeena, waxaan go’aansanay in aan kala tagno,” ayay ku shaaciyeen baraha ay ku leeyihiin Twitter.
Waa kuma nink Bill Gates kaalinta qofka labaad ee ugu taajirsan dunida kala baxay?
Qoraalka sawirka,Bill iyo Melinda Gates